Xildhibaan Xidig: Shaqsiyaad wata magac hay’ado ayaa 50% abuura dhibaateynta Soomaaliya – Kalfadhi
Xildhibaan Xidig: Shaqsiyaad wata magac hay’ado ayaa 50% abuura dhibaateynta Soomaaliya
Bismillaah: Laga soo bilaabo burburkii Dowladii Kacaanka ee Allaha u naxariistee Gen. Maxamed Siyaad Barre hogaanka u hayey, dalka Soomaaliya waxaa isugu yimid ajaanib kala duwan, oo magacyo badan wata, dhamaantoodna ku abtirsada sumado hay’ada caalami ah, dowlado iyo kuwo samafal, oo NGO loo yaqaano.
Hadaad si dhab ah u daristo farsamooyinka iyo xeeladaha ay adeegsadaan shakhsiyaadka ku hawl gala magacyada aan kor kusoo sheegay, waxaa kuu muuqanaya mushkiladda Soomaaliya haysata in ka badan 50% inay iyagu abuuraan ama taageeraan.
Waa hubaal inay jiraan dowlado iyo hay’ado ay dhab ka tahay taageerada dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, waxayna mudan yihin bogaadin. Balse, waxaa suuragal ah in ujeedadaas fiican ay shakhsiyaadka aan kor kusoo sheegay ay farsamooyinkooda ma dhamaatada ah u isticmaalaan.
Hadaad xusuusataan. waxaan sanadkii hore Kulamadii Baarlamaanka ka jeediyay in shaqooyinka ay qaban lahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee ay ajaanibtu hadda qabato la soomaaliyeeyo, oo dhalinyarada Soomaaliyeed la siiyo shaqooyinkaas.
Haddaba, go’aanka Dowlada Federaalka ay dalka kaga saartay Wakiilka Ergeyga Qaramada Midoobay wuxu daahfur u noqonayaa in dib loo eego dhamaan ajaanibta dalka ka howl gasha, xirfad kasta iyo magac kasta haku joogeen.
Anigoo ku bogaadinaya Hogaanka Dowlada Federaalka, waxaan soo jeedinayaa in hoos loogu daadago halka sartu ka quruntay, xididkana loo siibo kooxaha midabada iyo magacyada badan ee aan kor kusoo sheegay.
Hon: Abdirashid Xidig
Diiwaan-gelinta Musharraxiinta Madaxtinimada Puntland oo gaba-gaba mareysa
Xildhibaan ku eedeeyey dowladda in ay Galmudug ka joojisay mashaariic bini’aadanimo